Madaxweyne Faraamjo iyo Ra’isul Wasaare Kheyre oo Ka Tacsiyadeeyay Geeridii ku Timid Allaha ha u Naxariistee…. – Kismaayo24 News Agency
by admin 20th February 2018 078
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka soomalia mudane maxamad c/llahi farmaajo iyo ra’isul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali kheyre ayaa waxa ay ka tacsiyadeeyeen geeridii ku timid allaha ha u naxariistii afhayeenkii odayaasha beelaha hawiye Nabaddoon axmad diiriye cali oo xalay ku geeriyooday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho.
Nabaddoonka oo waayadaan ku xanuunsanaay magaalada muqdisho ayey xalay u timid qadartii alle waxaana geeridiisa ka tacsiyadeeyay madaxda dalka ugu sareeyso.
” Waxaan uga tacsiyeynayaa Shacabka Soomaaliyeed geerida Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo xalay ku geeriyoday Muqdisho, Ilaahay ha u naxariisto, samir iyo iimaanna ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay” ayuu yiri madaxweyne farmaajo.
Sidoo kale ra’isul wasaare xasan cali kheyre ayaa ka tacsiyadeeyay geerida nabaddoon axmad diiriye waxaana uu si gaar ah ugu tacsiyadeeyay ehelladii caruurtii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday.
Dhagayso:- Gen Fartaag " Aad ayaan ugu Faraxsanahay in Wafdi Caalami ah ay kismaayo yimadaan "